September 9, 2021 September 9, 2021 N88LeaveaComment on एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा नेताहरूका घर–घरमा पुगेर भेट गरेपछि, आगाे भए भीम रावल दिए ‘दनक’ !
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोलीले नेताहरूका घर–घरमा पुगेर भेटघाट गरिरहेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार सामाजिक संजालमार्फत रावलले एमसीसीको टोली नेताका घरघरमा पुगेर एमसीसी पास गर्न दबाब दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘संविधान जारी गर्न लाग्दा नेताको घरमा पुगेर विदेशीले दवाव दिने,सरकार […]
राजनीतिमा आउन लागेका देउवाका छोरा जयवीर कस्ता छन् ? उनकाे पेसा के हाे के गर्दैछन् ?
September 9, 2021 N88LeaveaComment on राजनीतिमा आउन लागेका देउवाका छोरा जयवीर कस्ता छन् ? उनकाे पेसा के हाे के गर्दैछन् ?
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पुत्र जयवीर कांग्रेसको राजनीतिमा आएका छन् । गृहजिल्ला डडेल्धुराबाट क्रियाशील सदस्य बन्दै जयवीर कांग्रेसको राजनीतिमा आएका हुन् । डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर १ बाट उनले कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिएका हुन् । कांग्रेसमा केन्द्रबाट सदस्यता काट्ने र थप्ने गरिएको भन्दै विवाद भइरहे पनि देउवापुत्र तल्लो तहको सिफारिसमै […]
उपाध्यक्ष फातिमाको दौडधुप, ओली पछि बाबुराम र माधव नेपालसँग पनि भेटवार्ता, प्रचन्ड र देउवालाई भोली भेट्ने !
September 9, 2021 N88LeaveaComment on उपाध्यक्ष फातिमाको दौडधुप, ओली पछि बाबुराम र माधव नेपालसँग पनि भेटवार्ता, प्रचन्ड र देउवालाई भोली भेट्ने !
काठमाडाैं । चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमार सहितको प्रतिनिधिमण्डललले आफनो राजनीतिक भेटघाटलाई तिब्र बनाएको छ। भोली शुक्रबार ४ बजे प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासंग भेटवार्ता हुने छ। भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरुवीच एमसीसी संसदवाट पारित […]
रामकुमारी झाँक्री र योगेश भट्टराई जिस्किएको भिडियो भाइरल (भिडियोसहित) के हाे यिनकाे चालामाला ?
September 9, 2021 N88LeaveaComment on रामकुमारी झाँक्री र योगेश भट्टराई जिस्किएको भिडियो भाइरल (भिडियोसहित) के हाे यिनकाे चालामाला ?
काठमाडौँ । योगेश भट्टराई र रामकुमारी झाँक्री जिस्किएको भिडियो भाइरल बनेको छ । बुधबारको संसद बैठकपछि संसद भवनमा उनीहरु जिस्किएको भिडियो भाइरल भएको हो । कानुनी रुपमा योगेश भट्टराई र रामकुमारी झाँक्री अलग दलका सांसद हुन् । संसदमा भेट हुँदा उनीहरु जिस्किएका हुन् । उनीहरु दुई जनासँग अर्का सांसद गणेशकुमार पहाडी पनि थिए । एमाले […]
‘केपी ओली यो राष्ट्रको नायक हो, उहाँले देखाएको बाटोमा नै राष्ट्र हिँड्ने हो’
September 9, 2021 N88LeaveaComment on ‘केपी ओली यो राष्ट्रको नायक हो, उहाँले देखाएको बाटोमा नै राष्ट्र हिँड्ने हो’
काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य सुमन प्याकुरेलले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो मर्यादाअनुसार भूमिका निर्वाह नगरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले आफ्नो पार्टीले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई विधिसम्मत् रुपमा कारबाही गर्दापनि सभामुखले पदमुक्त नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे । हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि […]
फतिमालाई झड्का – एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्न एमालेद्धारा अस्वीकार
September 9, 2021 N88LeaveaComment on फतिमालाई झड्का – एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्न एमालेद्धारा अस्वीकार
काठमाडौँ । चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसी अध्यक्ष फतिमा सुमारलाई पहिलो भेटमै झड्का मिलेको छ । फतिमाको एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न सहयोग गर्न गरेको आग्रह प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अस्वीकार गरेको छ । फतिमाको नेपाल भ्रमणको पहिलो भेट नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग निवासमै पुगेर गरेकी छिन । उक्त भेटमा फतिमाले […]
रवि लामिछाने पनि एमसीसीको पक्षमा: भने- ‘एमसीसी पास गर्नुपर्छ’
September 9, 2021 N88LeaveaComment on रवि लामिछाने पनि एमसीसीको पक्षमा: भने- ‘एमसीसी पास गर्नुपर्छ’
एममीसी बारे नबोलेको भनेर चर्को आ लो च ना भए पछि संचारकर्मी रवि लामिछानेले बल्ल मुख खोलेका छन् । उनले एमसीसी पास गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । सामाजिक संजाल मार्फत आफ्नो विचार राख्दै लामिछानेले फेरी पनि गोलमाल जवाफ दिएका छन् । टेलिभिजनको कामले बोल्न नभ्याएको भन्दै एमसीसी जस्तो देशकै सार्वभौमिकताको बिषयमा जोडिएको बिषयमा पनि उनले […]
सम्पत्ति हडप्न खोजेको भन्दै ‘बाबा’लाई कुटीमा प्रवेश निषेध
September 9, 2021 September 9, 2021 N88LeaveaComment on सम्पत्ति हडप्न खोजेको भन्दै ‘बाबा’लाई कुटीमा प्रवेश निषेध
मुकेश कुमार यादव सिरहा । सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका १ बल्टिया कुटीका बाबा (महन्थ) लक्ष्मीनारायण यादवलाई स्थानीयले निषेध गरेका छन् । कुटीको सम्पत्ति हडप्न खोजेको, कुटीमा बस्दै आएकी ७० वर्षीया सन्यासी माईरामनीको हत्या गरेको भन्दै स्थानीयले बाबालाई अब कुट्टीमा बस्न नदिने अडान राखेका हुन् । कुटीमा बस्दै आएकी सन्यासी माईरामनी एक महिनाअघि पासो लगाई झुण्डिएको अवस्थामा फेला […]
एमसीसीको वि’रोध गर्न पुगेका स्वागत नेपालसहित ६ जनालाई प्र’हरीले घो’क्रे ठ्याक लगाएपछि…..
September 9, 2021 N88LeaveaComment on एमसीसीको वि’रोध गर्न पुगेका स्वागत नेपालसहित ६ जनालाई प्र’हरीले घो’क्रे ठ्याक लगाएपछि…..
काठमाडौँ । एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौं आउँदा विरोध गर्ने स्वागत नेपालसहित ६ जनालाई प्र ह रीले प क्रा उ गरेको छ । महानगरीय प्र ह री परिसरका प्रवक्ता एसपी रमेश बस्नेतका अनुसार त्रिभुवन विमानस्थल बाहिरबाट अधिवक्ता स्वागत नेपालसहित ६ जनालाई प क्रा उ गरिएको हो । उनीहरुले एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली काठमाडौं आएलगत्तै […]
एमसीसी उपाध्यक्षलाई ओलीले भने- ‘मेरो पालामै एमसीसी पास गर्न खोजेको थिए तर माधब-प्रचण्डले रोके’
September 9, 2021 N88LeaveaComment on एमसीसी उपाध्यक्षलाई ओलीले भने- ‘मेरो पालामै एमसीसी पास गर्न खोजेको थिए तर माधब-प्रचण्डले रोके’
काठमाडौँ । अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको टोली र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीवीचको भेटवार्ता केही समय अघिमात्र सकिएको छ । केपी शर्मा ओलीले आफू सरकारमा हुँदा एमसीसी अगाडी बढाएर पास गर्न खोजेको तर अरु नेताहरुले असहयोग गरेर रोकेको बताएका छन । केपी शर्मा ओलीले नामै नलिई […]